निर्वाचित भएपछि बैठकमा किन सहभागी हुँदैनन् एनआरएन पदाधिकारी ? | Sambad Media
निर्वाचित भएपछि बैठकमा किन सहभागी हुँदैनन् एनआरएन पदाधिकारी ?
काठमाडौमा गैरआवासीय नेपाली संघको ८औं विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । उम्मेदवारहरु आफू चुनावमा निर्वाचित भए विश्वभर रहेका नेपालीहरुको मात्र होइन, नेपाल र नेपालीको भविष्य नै पलभरमै परिवर्तन गरिदिने प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर, निर्वाचनपछिको एनआरएनभित्रको अवस्था कस्तो छ, त्यो भने निर्वाचित भएकाहरुले बैठकमा देखाएको उपस्थितिले नै स्पष्ट पारेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ स्रोतले जनाएअनुसार निर्वाचित पदाधिकारीहरु बैठकमा उपस्थित हुन साह्रै गाह्रो मान्ने गर्दछन् । अझ परेका बेला काममै कट्ने त निकै कम हुने गरेको अनुभव खट्नेहरुको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको पहिल्लो कार्यकालमा बसेका एउटा पनि बैठक नछुटाउने जम्मा चार जना पदाधिकारी मात्र देखिएका छन् ।
कति त ठुला गफ गर्ने तर बैठकमा समेत उपस्थित भएनन् । बैठकमा सबैभन्दा बढी सहभागी नहुनेमा आइसीसी सदस्यहरु रहेका छन्। एनआरएनए स्रोतका अनुसार पदाधिकारीहरु पनि कतिपय बैठकमा अनुपस्थित देखिएका छन् । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष शेष घले, उपाध्यक्ष कुमार पन्थ कोषाध्यक्ष, महासचिव डा बन्द्री केसी, महिला संयोजक सपिला राजभण्डारी कुनै पनि बैठकमा अनुपस्थित भएनन् । त्यसपछि क्षेत्रीय संयोजकहरुमा युरोप संयोजक कुल आचार्य ओसेनिया संयोजक महेन्द्रकुमार लम्सालबाहेक अन्य पदाधिकारी कतिले एक त कतिले एकभन्दा बढी बैठकमा सहभागिता जनाएका छैनन् ।
स्मरणरहोस् गैरआवासीय नेपाली संघको केन्द्रीय पदाधिकारी २४ सदस्यीय रहेको बताइएको छ । यसरी हेर्दा २४ जनामध्ये ६ जना मात्रले मात्र अधिकांश बैठकमा सम्पर्कमा रहने गरेका थिए ।
गैरआवासीय नेपाली संघ स्रोतका अनुसार कतिपय आइसीसी सदस्य त निर्वाचनपछि संघको सम्पर्कमै आएका छैनन् । तर, अहिले फेरि विर्नाचनको हावा चलेकाले उनीहरु पनि सम्पर्कमा आउने क्रम बढेको बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्यसहित गैरआवासीय नेपाली संघको केन्दीय सचिवालय १ सय ८ सदस्यीय रहेको संघले जनाएको छ।
एनआरएन स्रोतका अनुसार १ सय ८ जना सदस्यमध्ये २४ जनाले कुनै पनि बैठकमा उपस्थिति जनाएनन् । यसमा केही पदाधिकारी र बढीजसो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्य रहेको बताइएको छ। तर, अहिले राजधानीमा भने गैरआवासीय नेपाली संघको महाधिवेशनमा भाग लिन आउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
यसका लागि उम्मेदवारहरुले लाखौ लगानी गरेको आशंका गरिएको छ। उम्मेदवारहरुले आफूलाई भोट हाल्त पनि संयौको संख्यामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई काठमाडौमा उतारिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
स्मरणरहोस गैरआवासीय नेपाली संघको बैठक अनलाइनमा बस्ने गर्दछ । अनलाइन कन्फरेन्स बैठकमा जो जुन सुकै स्थानमा पुगेको भए पनि सहभागिता जनाउन सक्छ । तर, नियत नै खराब हुनेहरु अफलाइन गरेर बस्ने गरेको एनआरएन स्रोतले बतायो ।
अब हामी केही दिन गैरआवासीय नेपाली संघको इतिहासदेखि फुटको बाटोतिरको यात्रासहित सबै पक्ष उजागर गर्ने कोशिस गर्नेछौ ।